माइकल पी। ने अनफिनले एनी फेबर को हत्या को घोषणा गरेको छ: नकली समाचार या तथ्य? मार्टिन भिजल्याण्ड
हिजो मिडियालाई रिपोर्ट गर्यो कि माइकल पी। (जसले अब सबैलाई थाहा छ कि P लागि प्यान घर राज्य) ठूलो मात्रामा ऐफ फाबरको हत्याको घोषणा हुनेछ। त्यो अचानक प्रो फार्म सत्रको समयमा बाहिर आउन सक्छ। कि यो पहिले बाहिर ल्याइएन, पूर्णतया खुलापन संग फिट छैन कि प्रहरीले सधैं मामला मा दिएका छन्। पहिले हामीले सुनेको छ कि माइकल पीले साइटलाई स्वीकार गरेका थिए, तर विशेष गरी हत्याको लागि स्वीकार गरेन। त्यो यो उल्लेखनीय तथ्य साइटमा paradoxical रूपमा देखा पर्यो, सम्भवतः यो बारीको कारण हो। सबै पछि, आधिकारिक व्याख्यान को लगभग केहि केहि सही छ र समाचार अनुकूल थियो यदि यो राम्रो आयो। उदाहरणको लागि, एनी फेबर पहिले दफन गरियो, तर यो 24 घण्टा पछि एक उत्तेजनामा ​​अनुकूल थियो। जस्तो कि तपाईं अशुद्ध हान्से फाबरको रूपमा यस्तो एक प्रवक्ताको साथ गल्ती गर्न सक्नुहुन्छ। न्याय र पुलिस वर्षका लागि प्रवक्ताहरू छन्, तर आज परिवारहरू पनि प्रवक्ता छन् र तिनीहरू आफूलाई चित्रबाट बाहिर रहन्छन्। सबै पछि, तपाईं आफ्नो छोरी या प्रेमिका आफैले दुखाइ व्यक्त गर्न चाहनुहुन्न, तपाइँ एक पेशेवरलाई छोड्नुहोस्।
मानिसको मनोविज्ञानमा विशेष विशेषता छ जुन पहिल्यै यूसुफ गोबिल्सको रूपमा चिनिन्थ्यो, हाम्रो पूर्वी छिमेकीसँग 'एक्सएनमक्स /' एक्सएनक्सक्स शासन अन्तर्गत प्रचार प्रचारक। यदि तपाइँ प्राय: केहि कुरा दोहोर्याउनु हुन्छ भने, मानिसहरूले स्वचालित रूपमा यो विश्वास गर्नेछन्। वास्तवमा, यसले अब कुनै कुरा तार्किक छ कि छैन वा होइन, वा होइन भनेर। हेडलाइन वा गीता-हेर्ने र सम्मोहन आवाज बोल्ने समाचार पाठकबाट शीर्षकहरू आश्चर्यकलाप गर्दछ। "माइकल पीले ठूलो एनी फेबरको हत्याको घोषणा गरेका छन्"तपाईंको अवचेतन दिमागलाई विचार गर्नुहोस् कि यो मामला समाधान भएको छ र यो सम्पूर्ण कुरा भयो। तपाईं तथ्याङ्क पक्ष द्वारा पक्ष द्वारा राख्न र समझाई किन केहि केहि तार्किक लगिन सक्दैन। तपाईंको संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया तथ्याङ्क भन्दा बढी मिडिया द्वारा निर्धारित हुन्छ। तपाईं यस विचार संग प्रोग्राम गरिएको छ कि मिडिया झूठ बोल्न सक्दैन र तपाइँ समाचार तथ्यहरू ल्याउन सक्नुहुन्न। तपाईं तथ्यहरू हुन विश्वास गर्नुहुन्छ। यो शायद औसत पाठकसँग कुरा गर्दैन कि एनी फेबर केस सम्भवतः PsyOp हो वा होइन। हामी यो कुरा पूरा गर्न चाहन्छौं कि मात्र। र कसैको भाग्यको बारेमा अपराधी र स्पष्टता भन्दा उत्तम राउन्डिंग छैन। त्यसोभए हामी राम्ररी सुत्न सक्छौं। आँखा बन्द र बीकहरू बन्द गर्नुहोस्।
क्या तपाईं यो उल्लेखनीय नहीं मिलयो कि हामी तस्वीर मा एनी फेबर को परिवार या मित्र कभी नहीं मिलते हो र त्यो अदालत को मामलाहरु मा अलग कोठा मा हो? क्या तपाईं यो उल्लेखनीय नहीं मिलयो कि माइकल पाहुहुस को अदालत को कोठा मा नहीं आती है? कुनै चिन्ता छैन। आवश्यक ग्रीनस्क्रिन प्रविधिसँग, मिडियाले पनि यो आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ। तर पीएसओपी मामला को संभावना अझै पनि सतह भन्दा माथि उभिएको छ। हामी सुन्न सक्छौं वा मिडियामा कथाहरू हौं। तस्बिरहरू मन पराउँछन् समर्थित छन्, किनभने फोटोहरू सबैसँग बढेको हुन्छ।
वेबसाइट www.nepnieuws-checker.nl तपाईं कसरी विभिन्न प्रविधिको माध्यमबाट समाचार बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर बताउँछ। आजको सफ्टवेयर र कृत्रिम बुद्धिले वास्तवमा निश्चित गरेको छ कि हामीले सुन्न वा हेर्ने कुनै पनि कुरालाई हामी अन्धामा राख्न सक्दैनौं। तथापि के हो? हाम्रो मनोविज्ञान अझै टाढा छैन। हामी अन्धामा विश्वास गर्छौं; केहि असाधारण मामलाहरु को बाहेक। यदि मिडिया भन्छ कि रूसको नकली समाचार फ्याक्ट्री त्यहाँ छ, तब हामी विश्वास गर्छौँ कि कहिलेकाहीं सामाजिक सञ्जालमा नकली खबरहरू। तथापि, हामी हाम्रो पवित्र सेवकलाई प्रश्न गर्न हिम्मत गर्दैनौं। मिडिया (समाचार, अखबार, भाषण शो, पत्रिका, रेडियो, आदि) ले चर्चको स्थिति लिइसकेको छ। मिडिया हाम्रो नयाँ लिङ्ग रूम मंत्री हुन्। हामी अन्धामा विश्वास गर्छौँ र ऊ ऊ छन्। यद्यपि हामी कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई गल्तीमा समात्नु हुन्छ। तपाईंको पादरी, एनओएस समाचार, टेलिग्राफ, ट्राउभ, इवा जेकिने, जेरोन पउउ, र अरूलाई विस्फोट गर्न सकिँदैन। तिनीहरू असल छन् र तपाईलाई सत्य ल्याउछन् र आलोचनाका लागि खुला छन्। तिनीहरू कहिलेकाहीं पाप गर्छन्, तर त्यो मानिस हो।
एनी फेबरको हत्या अझै पनि एक PsyOp जस्तो छ र एक फोरेंसिक र स्वतन्त्र ढंगमा अन्वेषण गरिनु पर्छ। त्यसपछि प्रश्न उठाइन्छ जब:
किन यसले6दिन लिनुभयो एनी को कोट पछि पुलिसले माइकल पी। को देखे पछि, यो थाहा पाए कि एनएफआईले6घण्टा भित्र डीएनए प्रोफाइल हुन सक्छ?
एनी फेबरले आफ्नो प्रशिक्षणमा ANWB साइकल मार्गको सवारी किन गर्यो कि खराब मौसम आउँदै थियो र यो अन्धकार भएको बेला?
माइकल पीले एनीको चीजहरू वरिपरि विभिन्न ठाउँहरूमा किन स्विंग गरे?
एनी फेबर किन दफन गरियो र त्यो एक दिन पछि देखा पर्यो अचानक सजाय भयो?
माइकल पीले किन साइट स्वीकार गरे?
एनी फेबर को को थिए र उनको साथी को हो? नाथन फिडर?
माइकल पी। को शुरुवात दोषको के हो?
यस कथामा मुख्य पात्रहरू को हुन् र हामी फोटोहरू भन्दा अन्यको अस्तित्वको प्रमाण देख्न सक्छौं (कुन सीजीआई सिर्जना गर्न सकिन्छ)?
अनि निस्सन्देह त्यहाँ धेरै प्रश्नहरू छन् जुन पारित हुनेछ। समस्या यो छ कि अब हामी मीडिया, पुलिस, न्याय, एक वकील र एक परिवारको प्रवक्ताको रिपोर्टिङमा अन्धा विश्वास गर्न चाहन्छौं। हामी अगाडिको तस्बिर पाउछौं, तर पछि पछाडि वास्तविकता थाहा छैन। तथ्य के हो र कल्पना के छ? यो 1 को कारण हो जसको पहल हो nepnieuws-checker.nl सुरू भएको छ। यो साइटले स्वतन्त्र रूपमा जस्तै एनी फेबरको विषयहरू अनुसन्धान गर्नुपर्छ अनि स्वतन्त्र रूपमा 'नकली समाचार' उत्पादनको लागि मिडिया, प्रहरी र न्याय जाँच गर्नुहोस्। मीडिया संग सहयोग मा उनको सरकारहरु PsyOp को माध्यम ले मान्छे को माध्यम को 'समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान'नयाँ कानूनमा प्रतिक्रिया दिन सक्षम हुन सक्दछ? यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू मध्ये यो हो जुन यो पहलबाट जाँच गरिनेछ। लापरवाहीको प्रचारमा योगदानको आधारमा 'प्रभावकारी नागरिक खोजको' अन्तर्वार्ता (अचम्म) सन्देश थियो?खोज अनुप्रयोग सँगै'(नागरिकहरूमा एक सम्भावना एपियन अनुप्रयोग)? यस्तो प्रश्नलाई पनि सम्बोधन गरिनेछ। तर अनुसन्धानले वास्तवमा तथ्याङ्कहरूमा ध्यान दिनेछ।
यदि तपाइँ यस्तो स्वतन्त्र अनुसन्धानको वकिल हुनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई यो थाहा दिनुहोस् नकली समाचारको बारेमा राष्ट्रिय सर्वेक्षण। वा के तपाइँ चाहानुहुन्छ कि संसारको तपाईंको छवि जस्तो छ जस्तो छ? के हामी साँच्चै सत्य जान्न चाहानुहुन्छ वा केवल दुर्लभ कारणले गर्छ?
कानूनी रूप देखि असंगत घटना: डीएनए सबूत, ऐन फेबर र माइकल पी को सम्बन्ध मा फोर्सेनिक र ओटोप्सी रिपोर्ट
ट्याग: एनी फेबर, ज्ञात, विशेष, माइकल पी। माइकल, हत्या, हत्यारे, नकली समाचार, भट्टराई, प्यान घर, pro forma session, मुकदमा, बलात्कृत, मारियो, बस्यो
11 जनवरी 2018 मा 14: 56
..और जो अनुपस्थित नाथन को वकील छ .. .. tadaaaaaaa सेबास दिईस्टस्ट्रा
A / MIVD को स्पिन्डोक्टर
यो मान्छे मात्र डरावना कोरोनर संग NEP समाचार गर्दछ
11 जनवरी 2018 मा 17: 59
@ ज्यान, तीव्र साँच्चै रक्षा को स्थिर देखि आउछ। विगतमा धेरै पोष्टहरू समर्पित छन्। तपाईं स्पन्ग (ड्रग्स), Knoops, Korver (pedo मामलों) आदि छ र पछिल्लो Moskowicz मा जो सार्वजनिक अभियोग सेवा संग नजिक सम्बन्ध छ र यसैले VenJ संग।
उहाँ अहिले पनि यो मामलामा हुनुहुन्छ, जुन साँच्चै चिन्तित छ
11 जनवरी 2018 मा 18: 04
11 जनवरी 2018 मा 18: 57
कुन मंत्री Wiebes भन्छन् (2: 20 मिनेट।) दोहोर्याउन लायक हुन सक्छ: हामी केवल हाम्रो भूमिकामा यहाँ, मेरो भूमिकामा, तर एक व्यक्तिको रूपमा पनि फेला परेन "। हो, राजनीति र मिडियाको महिला र सज्जनहरूले अभिनेताहरूको रूपमा भूमिका खेल्छन्। तपाईं आफ्नो भूमिका वा तपाईंको मानवता बाट केहि पाउन सक्नुहुनेछ। त्यो धेरै सामान्य छ र हामी त्यो आदी हो।
ईभाले एनी फेबरको बारेमा "तथ्याङ्कहरू" लाई रोक्छ जस्तो कि यो अविश्वसनीय थियो। त्यो सम्झौता हुँदैन। यो सिर्फ "साँचो" हो। अनि नाथन फिडरको खुसीजन्य वकील निश्चित रूपमा स्पष्ट हुनु पर्छ कि यो सबै गाह्रो र गाह्रो हुन्छ। प्राकृतिक रूपमा नातानले ट्यूबको लागि आउन सक्दैन।
म ईभा ज्याकिना बाट एक बयान सम्झन्छु कि त्यो एक 18 जन्मदिन केटी को रूप मा एकदम exhibitionistic थियो र उनको नशे मा जब सार्वजनिक रूप देखि उनको कपडे पहनना पसंद थियो। सुश्री ध्यान राख्दछन् र यदि तपाईं ध्यान दिनुहुन्छ भने तपाई मन नपर्नु .... शक्ति हुनु।
11 जनवरी 2018 मा 18: 58
अनि त्यसपछि पुरानो बक्सबाट राम्रो कहानी आकर्षित गर्न समय हो: "मैले पेय पदार्थको रूपमा प्रदर्शनीवादीको रूपमा प्रयोग गरें। मेरी प्रेमिका उनको बारेमा पागल थियो। जब मैले फेरि अचम्म लागेँ, उनीहरूले सोधे: कृपया। यसलाई रोक्नुहोस्। हामीले पहिले नै तपाईंको सम्पूर्ण शरीर देख्यौं। म सीमा खोज्दैछु। तर अब त्यो अवश्य सम्भव छैन, दुर्भाग्यवश। "
11 जनवरी 2018 मा 19: 01
यो पनि एक आदर्श ब्ल्याममेल हो, निस्सन्देह, नयाँ रोममा हाम्रो लागि केहि अजीब छैन ..
11 जनवरी 2018 मा 19: 56
नहीं, तपाईं एक महिला को रूप मा गर्न सक्छन्। यदि तपाईं मानिसको रूपमा अनावश्यक हुनुहुन्छ र पेंडुलमको साथ स्विङ्ङ पट्टीमा नग्न खडा गर्नुहुन्छ, त्यो कम स्वीकार्य छ। पछिल्लो अवस्थामा तपाइँ ब्ल्याममाईड (एक मानिसको रूपमा) हुनेछ। यदि तपाईं त्यो महिलाको रूपमा गरिरहनुहुन्छ (सार्वजनिक रूपमा उकालो), तपाईं केवल लोकप्रियतामा बढ्नुहुनेछ। यसकारण हामीले प्लेब्याक र सामान जस्तै पत्रिकाहरू छौँ।
11 जनवरी 2018 मा 20: 03
haha ???? यदि जेनेकले आफैलाई एक आदर्श बहुमूल्य रूपमा प्रस्तुत गर्दछ भने, यसले तपाईंको 'छवि' लाई हानि पुऱ्याउन सक्छ जुन अब तपाइँ एनएलपी कार्यक्रम (कार्यक्रम) प्रस्तुत गर्न योग्य हुनुहुन्न। त्यसोभए कसलाई थाहा छ के उनीहरुका फोटोहरू छन् र वास्तवमा क्यान्सर बेल्ट कुलीन संग उनको सम्बन्ध पनि उनको स्थान को स्थिति पनि बलियो बनाउँछ।
तिनीहरू आफैलाई कोराइने कोनेहरूमा निस्कन्छन् र यसको भाग लिन सकिन्छ र खुट्टा फैलाउन पनि अजीब छैन।
11 जनवरी 2018 मा 21: 22
@zandinogen ..thx र Ivana Smit भूल नगर्नुहोस्
यी सबै अवस्थाहरूमा त्यहाँ एकल फोटो छैन, सबै चीजहरू संयुक्त हुन्छ
... र जहाँ सम्म Sebas सम्बन्धी छ, त्यो अझै पनि एक हिप हो, एकदम धेरै बढावा दिन र सबै गोठाला चीजहरू आफ्नो गोदमा फ्याँकिएको जस्तो देखिन्छ। सम्भावना ....
12 जनवरी 2018 मा 11: 52
... र दास Graafsma मत भूलना ...
एउटै खेलाडीहरू (Diekstra र vd गूट) - र यो मामलाले निजी अनुसन्धानको सफलता सुरू गर्यो ...
12 जनवरी 2018 मा 12: 15
एनी फेबरको मामलाले मलाई 1 बाट शंकास्पद गरेको छ, नयाँ विधानको परिचय र नयाँ एस्पियनज्यूज (मानिसहरूमा) उपकरणहरू जस्तै 'खोज अनुप्रयोग' सँगै (जस्तै अघिल्लो पोष्ट टाइमलाइन हेर्नुहोस्) परिचय गर्नका लागि PsyOp मामला हो। सौभाग्य देखि, यो धेरै साइटहरु द्वारा उठाएको छ; केवल तिनीहरू त्यस्ता एप्सको मुख्य समस्याको वर्णन गर्दैनन् (जुन यो विश्लेषणमा कमी छ)। सबैभन्दा ठूलो समस्या तपाईले यस्तो स्वीकार गर्ने अधिकार हो जब तपाइँ यस्तो एप स्थापना गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाई पुलिसको सेन्सरमा पुलिस पूर्ण समय प्रत्यक्ष पहुँच दिनुहोस्। छोटोमा: तपाईले तपाइँको टेलिफोनलाई सिधा-सुन्दरी यन्त्रलाई पुलिसको लागि बनाउनुहुन्छ। काम गर! म यो भन्छु! निस्सन्देह, यस लेखको लेखक 'साजिश सिद्धान्त' को लागी माफी माग्नु पर्छ, किनकि उह बुबा, यदि तपाईं महत्वपूर्ण हुनुहुन्छ भने तपाई एक 'साजिश विचारक' हुनुहुन्छ। होइन, तपाईं केवल महत्वपूर्ण हुनुहुन्छ; त्यो अनुमति छ! त्यो गर्नु पर्छ! त्यो बुद्ध 'साजिश विचारक' स्ट्रिमाबाट छुटकारा पाउनुहोस्! त्यो स्ट्याम्पले मीडियाको आलोचनालाई उनीहरूको कुनै पनि आलोचनाको सेवा गर्न सक्षम बनाइयो। तैपनि म यो लेख केही समयको लागि छु, ताकि तपाईं अधिक मानिसहरू देख्नुहुन्छ कि हामी कसरी अधिक देखि अधिक हातहरू हातबाट टाढा दिन्छौं:
12 जनवरी 2018 मा 12: 53
यसबाट मैले पाठ्यक्रमको "सफलता" भनेको हुँ, किनकी यो सिर्फ केहि चालाक गर्न केहि छ। हामी YouTube बाट सार्वजनिक प्रसारकबाट "अनुरोध अनुरोध" बाट स्विच देख्छौं
12 जनवरी 2018 मा 19: 41
शब्द को साजिश प्रमेक्टर जेएफके को हत्या को लागि सीआईए द्वारा प्रयोग गरिएको थियो ताकि हरेक महत्वपूर्ण विचारधारा को कष्ट हो। र उनी सफल भए ... अहिलेसम्म
सीआईए डिस्पैच # 1035-960 (1967)
यस प्रेषणको उद्देश्य भौतिक प्रतिबन्ध प्रदान गर्न र साजिश सिद्धान्तहरूको दावीलाई बेवास्ता गर्दै छ,
प्रचार प्रचार को लागी काम गर्न र आलोचकहरु को हमला को प्रतिफल को लागी। यस पुस्तकको लागि समीक्षा समीक्षा र फीचर लेख विशेष गरी उपयुक्त छन्।
निजी मा मीडिया छलफल को कुनै पनि विशेष लेखक मा निर्देशित नहीं, या आने वाला प्रकाशनहरु मा आने को लागी,
आलोचकहरु अक्सर बौद्धिक गौरव को एक रूप द्वारा entested गरिएको छ: उनि केहि सिद्धान्त मा प्रकाश र यस संग प्यार मा गिरावट; तिनीहरू पनि आयोगमा उछिन्छन् किनभने यसले सधैँ हरेक चीजको जवाफ नदिन्छ।
किन खोजी अनुप्रयोग पुलिसबाट?
प्रहरीले नागरिकताको संलग्नतालाई मान्दछ, तर त्यहाँ पनि डराउँछन् कि स्वयंसेवकहरूले गल्तीलाई चिन्ह लगाउँछन् वा बाधा पार्छन्। यसकारण प्रहरीले यसलाई महत्त्वपूर्ण बनाउन खोज्छ जब ठूला समूहहरू हेर्न थाले। यस समयमा केही पाइन्छ, त्यो स्थान अनुसन्धान को ट्रेस गर्न को लागी एक अपराध दृश्य को रूप मा वर्णित हुनु पर्छ। यसको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ कि प्रहरीले त्यहाँ गएको छ, र एपसँग सम्भव छ भनेर थाहा छ। यसबाहेक, प्रहरीले अग्रगामी व्यक्तिहरूलाई चेतावनी दिन चाहन्छ, त्यसैले तिनीहरू वास्तवमा तिनीहरूसँग खोजिरहेका छन् के बारे मा सजग छन्: यो सुखद हिड्ने यात्रा होइन। यो मान्छे मा एक ठूलो मनोवैज्ञानिक प्रभाव हुन सक्छ।
सबैभन्दा महत्त्वेपूर्ण प्रश्न हो जहाँ तपाइँ यस्तो एप स्थापना गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई अनुमति दिनुहुन्छ?
11 जनवरी 2018 मा 20: 25
नागरिकहरू शक्तिशाली शक्तिसँग ठूलो मात्रामा प्रयोग गर्न भ्रष्ट प्रणालीमा छिट्टै अन्ततः समाप्त गर्न। तपाईं किन सहमत हुनुभयो र आफ्नै आफ्नै जेल निर्माण गर्न र लामो समयसम्म आफ्नो मृत्युको लागि सहमत हुनुहुन्छ? यसको लागि भुक्तान गर्न चाहनुहुन्छ? अझ पनि खराब, सरकारले कति नागरिकताहरूसँग स्वयंसेवकहरू पत्ता लगाउन ठूलो प्रयास गर्दैछ। झूठको संसारसँग हरेक सम्पर्क रोकियो। यसले उनीहरूको नकारात्मक ध्यान पाउने कुरा गर्दैनन्। र धेरै नागरिकहरूले उनीहरूलाई झूट बोल्छन्। तिनीहरू धोका दिएका छन्, तर बिस्तारै उनीहरूले यसलाई सामान्य खोज्न थाले र सम्भवतः माया गर्छन्। खराब कुरा यो पहिले देखि नै मेरो विचारमा आएको छ। तिनीहरू दुर्व्यवहार र यसलाई प्रेम गर्न थाले, खराब कुरा। घोर समाज।
त्यहाँ कुनै व्यावसायिक फुटबलर छैन जुन खाली स्टेडियममा फुटबल खेल्न चाहन्छु, त्यस पछि एक पेशेवर फुटबल क्लब अवस्थित रहनेछ। दबाइ उद्योगले स्वस्थ जनसंख्या चाहँदैन, अन्यथा उनीहरूका औषधि साम्राज्यहरू ध्वस्त हुन्छन्। प्रचार समाचारहरू किन्नुहोस् र मूल्याङ्कनहरू तल नदिनुहोस्, उनीहरूले अब झूट बोल्न र भ्रामक कार्यक्रमहरू थप गर्न सक्दैनन्। जब राजनीतिज्ञहरू अब गम्भीरतापूर्वक लिइएनन्, ती शक्तिहरूमा ती ठूलो समस्या छन्। र कम र कम मतदान गरिनेछ भने, तनाव समाप्त हुनेछ किनभने तिनीहरूले अब नागरिकहरूलाई मूर्ख बनाउन र मूर्ख बनाउन सक्नेछन्। तिनीहरूले अब तिनीहरूलाई खेल्न सक्दैन किनभने उनीहरूलाई अब ती ध्यान दिदैनन्। यदि उनीहरूले कम र कम भित्री कोठाहरू आकर्षित गर्छन् भने, पुलिसहरू हुन अझ बढी छ। अधिक र अधिक नागरिकहरु को रूप मा जान्दछन् कि सरकारहरु कन्वेयर बेल्ट मा धोखा दे रहे हो, उनि अंततः सरकारहरु को अधिकार को पहिचान नहीं गर्नेछन्। उनीहरूको लागि एक दुःस्वप्न हो जब उनीहरूको आपराधिक प्रणाली बिस्तारै हुन्छ र नागरिकोंले आपराधिक र बिरामीको व्यवस्थालाई रोक्न मात्र सम्भव छ।
11 जनवरी 2018 मा 20: 57
म सोच्छु कि स्टकहोम सिन्ड्रोम स्पष्टीकरणको एक सानो भाग हो जुन मानिसहरू जान्छ र जान्छ अज्ञातको डरले: कुनै आय, सुरक्षा हराएको छ। त्यसैले जनावरको पकड हरेक दिन ठूलो हुन्छ ...
11 जनवरी 2018 मा 21: 09
बिल्कुल। मलाई आशा छ कि मानिसहरूले तपाईंको प्रतिक्रिया 3x पुन: पढ्ने र यसलाई छोडिदिए।
11 जनवरी 2018 मा 23: 36
केवल अपराधकर्मीको बारेमा जो म स्वतन्त्र रूपमा नकली अपराधीको रूपमा मेरो विचारको जवाफ दिनेछु।
एक निश्चित मिशेल प्यान, प्यान? क्या पान, अचानक मलाई एक निश्चित Panhuis को सम्झना गर्दछ। हो, ठीक छ!
Cor Panhuis। "झूठे झण्डा" को MHhuNUMX / MH17 को कोर्घिस।
के यो एक संयोग हुनेछ वा व्यक्ति (Aivd एजेन्टर) जसले आफ्नो नाम मेक्सएक्सएक्सएमएमएक्समा नै मेक्सिकोमा काम गरेको छ? ????
वैसे, MH17 alis MH370 को गोली मार नहीं गरेको छ तर वहाँ (नाबोरो) यूक्रेन मा जमा गरिएको छ!
शूटिंग मतलब हुनेछ कि बर्बाद एक अधिक (धेरै!) मा फैलिएको हुनेछ सबै परिणाम संग ठूलो क्षेत्र, यति कम प्रमाणित, साक्षी जो घर आदि आदि आदि।
12 जनवरी 2018 मा 11: 11
मलाई बुझ्न तपाईं किन आध्यात्मिक साइटको जवाफ दिनुहुन्छ जहाँ चीजहरू चम्किलो हुन्छ।
यहाँ मेनु वस्तु संग्रह अन्तर्गत वेबसाइटमा MH17 फाइल भर पाउन सकिन्छ, तर Joost Niemöller रूपमा desinfo एजेन्ट संग halfhearted मिश्रण रूपमा व्याख्या छैन।
यसैले मैले तपाईंको लिङ्क हटाउछु। एक पटक फेरि पत्ता लगाउन सक्छ कि MH17 विलय कसरी भण्डारण गरिएको छ:
12 जनवरी 2018 मा 11: 31
@ मार्टिन पूर्णतया बराबर र स्वीकृत।
12 जनवरी 2018 मा 08: 01
किन Sebas एफ (ओल) टी को लागि लेख्छ (त्यो) एम (एनी)?
2 फरवरी 2018 मा 13: 10
धेरै खतरनाक भागमा म पनि मनोरञ्जन साझा गर्न चाहन्छु ...
कि एम्स्टर्डम मा विट्टेनबर्ग "धेरै ध्यान" को आकर्षित गर्दछ।
यो निस्सन्देह, एक धेरै दुखद समाचार वस्तु हो
हामी तीव्र रहनु पर्छ ... यो एक आश्चर्य संग
तस्विरहरू हेर्दा, यो ध्यान दिइन्छ कि फूलहरूमा राखिएको व्यक्ति "1" नाममा एक फूल राखिएको नाममा समावेश छैन। यदि तपाईंको साथी मरेको छ भने, तपाईं पुरा तरिकाले तपाईंको नामको साथ कार्ड बनाउनुहुन्छ।
यो मान्छे प्रहरी हैरानी र एंबुलेंस र साथ सुने शट सुने (एकै समयमा !!!) बाहिर वहाँ तर केवल 1 1 हो मात्र उम्कन मार्ग उपलब्ध थियो खुला विन्डो butthe अपराधीहरूले संग भागे .. (अध्ययन क्षेत्र एक पटक मात्र)
त्यसो त त्यहाँ गोली लागेको थियो र पुलिस त्यहाँ थिए र अझै कम्तीमा 10 किलोमिटर हटाइयो र त्यसपछि कार आगोमा छ?
त्यहाँ धेरै अचम्म छ, हामी अहिले यसको लागि छोड्छौ
यहाँ हेर्नुहोस् व्याख्या (लिङ्क अन्तर्गत एभीजीएफको चलचित्र हो) पछि मात्र घटना, दृश्यहरू सुनेका थिए त्यहाँ चमकदार रोशनीहरू थिए र त्यहाँ एम्बुलेंसहरू थिए
27 मई 2018 मा 10: 40
एक टुक्राबाट एनीको बुबा ठूलो मात्रामा भोक्सक्रेंटरबाट बोल्नुहुन्छ, यसले देखाएको छ कि जब उनी यो तरिका पढ्न सकिन्छ। अब फेरि कष्टमण्डल छैन। यो के हो? खराब पत्रकारिता? यसबाहेक, यो दृष्टान्त हो कि बुबाले उनीहरूको उचाई र औंठी मात्र पहिचान गर्न / पहिचान गर्न सक्थे।
ती तस्वीरहरु जुन मैले अङ्गबाट ​​अँध्यारोमा फेला पार्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ कि उनीसँग धेरै विशेष थम्बनेल छ। यसबाहेक, यो मलाई लाग्छ कि आमाबाबुको रूपमा तपाईंले आफ्नो बच्चाको प्रत्येक स्केल / तिल आदि जान्न सक्नुहुन्छ, तर जाहिरा यो पिताले गर्दैन। उहाँले तिनको उचाई र औंठी मात्र जान्नुहुन्छ।
27 मई 2018 मा 12: 59
तपाईंको ध्यानको लागि धन्यबाद! तपाईंले यस समयमा देख्न सक्नु भएकोमा, मैले यो लेखलाई समर्पित गरेको छु।
« टेरे डे होममेम र 'बाल दुर्व्यवहार' शब्द 'pedosexual' देखि हल्का बनाउने प्रक्रिया
"सबै महिलाहरू तपाईका आफ्नै आमाबाहेक, क्यान्सर हुन्" र # मुख्य छलफल »
कुल भ्रमण: 4.298.837